yadanar's Page - Myanmar Network
Started this discussion. Last reply by 2zoteoi0r1ztg Sep 1, 2011.4Replies6Likes
The Academic Reading test is 60 minutes long. Texts for the Academic Reading test are taken from books, journals, magazines and newspapers. A variety of questions is used, chosen from the following…Continue
ကျွန်မဖတ်ဖို့ - နိုင်းနိုင်းစနေ
Started this discussion. Last reply by sulei Feb 21, 2014. 1 Reply6Likes
(၁) အပြစ်ရှာညည်းတွားတတ်တဲ့ လူတွေဟာ စိတ်သဘောထားမကောင်းသူတွေ မဟုတ်ပေမယ့် လူတွေအမြဲနှစ်သက်သူတော့ မဟုတ်ခဲ့ဘူး။ (၂) အလုပ်များနေတာက အရေးမကြီးဘူး။ အရေးကြီးတာက ဘာအတွက်အလုပ်များနေလဲ ဆိုတာပဲဖြစ်တယ်။…Continue
ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်ရထား ဗုံးပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ရန်ကုန် ဘူတာကြီးတွင် စစ်ဆေးရှာဖွေရေးနှင့် လုံခြုံရေး ပိုမိုဂရုပြု ဆောင်ရွက်သွားမည်
Started this discussion. Last reply by 3hw4e2sp011l7 May 29, 2011.2Replies0Likes
ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လူစီးရထား ဗုံးပေါက်ကွဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ရန်ကုန်ဘူကြီးတွင် စစ်ဆေးရှာဖွေရေးနှင့် လုံခြုံရေးများ ပိုမိုသတိထားဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်ဘူတာကြီးတိုင်းတာဝန်ခံ ဦးလဘန်ရှိန်ရက်က…Continue
ဓာတ်ပုံသမားတစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီး အချိန်တော်တော်ကြာတဲ့အထိ တနင်္သာရီဒေသဘက်ဆီကို မရောက်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ အခုတော့ ဓာတ်ပုံ အပေါင်းအသင်းတွေဖြစ်တဲ့ ကိုဗူးသီး၊ ကိုလင်းထွန်းတို့ရဲ့ ကောင်းမှုနဲ့ တနင်္သာရီဒေသကိုသာမက…Continue
yadanar has not received any gifts yet
At 16:10 on August 11, 2010, Soe Thiha said…